Jiri uru Lightinthebox a maka ịzụ ahịa ekeresimesi | Akụkọ akụrụngwa
Onwa Disemba bu onwa ebe ulo ahia nile na emeghe kwa ubochi, mepee ma juputa ya na ndi mmadu, dika odi ka echi adighi. Ọtụtụ ndị bụ ndị na-agagharị site na ụlọ ahịa na-achọ ụfọdụ onyinye oge ikpeazụ, ụfọdụ nkwalite na-atọ ụtọ, ụfọdụ ego ... mana ịnọ na Christmas, oge ahia kachasị mkpa maka ọtụtụ ndị ahịa, o siri ike ịhụ ihe na-atọ ụtọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị atụgharịa gaa na Internetntanetị, ọ dịkarịrị mfe ịchọta ụfọdụ onyinye ndị ọzọ, obere onyinye na oge, maka ụbọchị ole na ole. N'ụzọ nke a, ụmụ okorobịa si Lightinthebox tinyere anyị usoro nke onyinye anyị na-agaghị echefu oburu na nke anyi abughi ebe ahia ma taa anyi amaghi ihe anyi ga-azuta ya na ekeresimesi.
1 Xiaomi Mi Robot agụụ Cleaner
2 Clọ ihe nkiri Cinema
3 Igwe okwu karaoke
6 Xiaomi Mi Nyocha 3
Xiaomi Mi Robot agụụ Cleaner
Ndị na-ehicha agụụ na-ejide onwe ha aghọwo otu n'ime ngwaọrụ kachasị amasị ọtụtụ ezinụlọ, ọkachasị maka ndị na-anọ ụbọchị niile n'ụlọ na mgbe ha rutere na ihe ikpeazụ ha na-eche ime bụ ịgafe broom. N'ụzọ nke a Xiaomi na-enye anyị robot maka euro 236, mgbe ego ya na-emebu karịa euro 400, nke anyị nwere ike iji mee ka ụlọ dị ọcha mgbe niile mgbe anyị rutere.
Zụrụ Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Clọ ihe nkiri Cinema
Ma ọ bụrụ na anyị nwererịrị rọbọt na-ahụ maka ihicha ụlọ anyị mgbe anyị na-anọghị, nhọrọ magburu onwe ya bụ ịzụta a projector dị ka nke anyị hụrụ na Lighinthebox maka naanị 115 euro. Ihe oru a na-enye anyi mkpebi nke 1280 x 768, obu ezie na o na akwado kwa mkpebi 1080p. Ọ nwere njikọ HDMI, 3200 lumens nke nchapụta na akụkụ 4: 3
Zụta Clọ Ihe nkiri Cinema
Igwe okwu karaoke
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnwale njirimara gị dịka onye ọbụ abụ, wee họrọ ịbanye na operación Triunfo academy, ya na igwe okwu ikuku a dakọtara na iOS na gam akporo, ị nwere ike ịmalite -eme ka osisi pines mbụ gị bụrụ naanị euro 14.
Zụta igwe okwu Karaoke
Anyị nwere ike ikwu obere ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara isi Xiaomi ugbu a, Mi MIX 2, ezigbo ọdụ na Qualcomm Snapdragon 835 processor kachasị ọhụrụ, 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ọnụahịa mbụ nke 499 euro, mana anyị nwere ike ijide ya site na onyinye a maka naanị 378 euro.
Fantastic 5,15-inch Xiaomi ọnụ njikwa site Qualcomm si Snapdragon 835, 6 GB nke Ram na 64 GB nke esịtidem nchekwa, a ọnụ na anyị nwere ike ịhụ maka naanị 294 na Lightinthebox.
Zụta Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi Nyocha 3
Mana, ọ bụrụ na anyị achọghị iji nnukwu ego iji megharịa ekwentị anyị, mana anyị chọrọ karịa ngwaọrụ ruru eru, Lightinthebox na-enye anyị Xiaomi Mi Rịba 3 maka naanị 256 euro, ọnụ ya na 6 GB nke Ram, 64 GB nke nchekwa dị n'ime ya nke Qualcomm's Snapdragon 660 jisiri ike.
Zụrụ Xiaomi Mi Rịba 3
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Jiri uru Lightinthebox a nyere maka ịzụ ahịa Ekeresimesi
Dika ihe omumu ohuru si di, mmadu mechara rute njedebe ya